मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावना – सजल सन्देश
नयाँ थपिने मन्त्रीमा को को ?
By Tejan khadka	 On१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:०९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बुझिएको छ । तर अकस्मात आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएकाले तत्कालै पुनर्गठन हुन्छ कि भन्ने मान्छेहरुले अनुमान गरेका थिए । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार बस्ने गरेको छ । सोमबार नसकिएका एजेन्डाबारे छलफल गर्न बिहीबार बस्ने चलन रहिआएको छ ।
सरकार केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यताका कारण दुई वटा मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय थप गर्न लागेको बुझिएको छ । यसअघि सरकारले ३० वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गरेको थियो । काशीराज दाहाल तथा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति र सहजीकरण समितिले पनि अब संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । संघीय शासनसहितको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र विस्तारका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच शुक्रबार, शनिबार सोमबार र हिजो मंलबार पनि यही विषयमा भेटघाट भएको थियो । प्रचण्डले सचिवालयका अन्य नेताहरूसँग गरेको परामर्शलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ‘गुटगत सहभागिता’ लाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीका रूपमा यो हाम्रो अन्तिम भेट पनि हुन सक्छ, कोही साथीहरू पर्नुभएन भने नरिसाउनु होला भनेका थिए । तर अहिलेसम्म पुनर्गठन हुन सकेको छैन । गुटगत भागबण्ड मिलाउन अझै केही दिन लम्बिन सक्छ पूर्व एमालेका एक नेताले तरुणसँग भने । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । मन्त्री मात्र बन्न तयार भए भीम रावल पनि मन्त्री बन्ने छन्, रावलले यसअघि गृह मन्त्रालय चलाएका थिए ।
महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुडलाई पर्यटनमा ल्याएर योगेशलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पनि सम्भावना छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता भयो भने प्रदीप ज्ञावलीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सोचाइमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । वामदेव गौतमलाई व्यालेन्स गर्न उनकी श्रीमती तुलसा थापालाई मन्त्री बनाइने स्रोतहरूले बताएका छन् ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडललाई मन्त्री बनाइयो भने उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय दिइने तयारी छ । तर नेकपाका नेत सुरेन्द्र पाण्डे आफूलाई अर्थ मन्त्री दिए मात्र खाने अन्यथा मन्त्री नबन्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिने वा अन्य कुनै एक मन्त्रालय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । उनलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । किनभने प्रचण्ड पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन चाहन्छन् । प्रचण्डको जोड गृहमन्त्री बादललाई कुनै हालतमा हटाएर उनको ठाउँमा पूर्वमाओवादी कसैको नाम ल्याउने उनको अभियानमा छ । प्रचण्ड गृहमै केन्द्रित भएकाले बुहारी विना मगरको मन्त्री पद जोगिने सम्भावना छैन ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको मन्त्रालय परिवर्तत हुन सक्ने बताइन्छ । महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुडलाई पर्यटनमा ल्याएर योगेशलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पनि सम्भावना छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता भयो भने प्रदीप ज्ञावलीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सोचाइमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । वामदेव गौतमलाई व्यालेन्स गर्न उनकी श्रीमती तुलसा थापालाई मन्त्री बनाइने स्रोतहरूले बताएका छन् । विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीका आकांक्षी छन् । तर विशाल भट्टराईले रामकुमारी झाँक्रीको अभियानमा साथ दिएकाले उनले सञ्चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । महेश बस्नेतले कुनै एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । नयाँ मन्त्री बन्नेहरूमा बाग्लुङका देवेन्द्र पौडेल, चितवनबाट चुनाव जितेका कृष्णभक्त पोखरेल, रौतहटका प्रभु साहलगयत छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न तयारी थालेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय, सचिवालयबाट प्राप्त म्यान्डेट र अध्यक्ष प्रचण्डसँगको निरन्तर छलफलका आधारमा ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी लागेका हुन् । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नेकपाको नीति र नियतमा तालमेल नहुने सम्भावना बढेको छ । किनभने हट्ने पनि र जाने पनि पार्टीका तर्फबाट होइन, गुटका तर्फबाट जानेछन्, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘गुटको सन्तुलन मिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विवाद हुँदैन, मिलेन भने विवाद हुन सक्छ । अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने आधार बनाइएको भनिएको छ ।
सचिवालयले ठोस मापदण्ड बनाउन नसकेपछि दुई नेतालाई मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई नै दिएको हो । हालको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमालेबाट ११ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीबाट सात मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीमा रामबहादुर थापाको अलग समूह छ । त्यसबाहेक प्रवक्ता श्रेष्ठको भिन्नै समूह छ । श्रेष्ठको समूहबाट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री छन् । अन्य सबै प्रचण्ड समूहका हुन् । तर, नेकपाको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा पूर्वमाओवादीतर्फका मन्त्रीहरू थापा र लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए । नेपाल समूहका तर्फबाट सरकारमा सहभागी घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई पनि ओलीप्रति उदार बनेका थिए ।
यता, वामदेव गौतमको घानमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ परेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भई पाँच वर्षका लागि मन्त्री बन्ने ढोका बन्द भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएको प्रकरण अदालतमा मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई सांसद पदको मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । यदि गौतम सांसद बन्न अयोग्य ठहर भए भने त्यसको मारमा प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि पर्दछन् ।
गत प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा गोरखा १ बाट तत्कालीन जनशक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग भारी मतअन्तरले पराजित भएका श्रेष्ठलाई केही महिनाअघि नेकपाले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएको थियो, तर त्यतिबेला भने खासै विवाद भएको थिएन । यतिबेला वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएपछि संविधानको धज्जी उडाइएको भन्दै ठूलो विवाद भएको छ । त्यसैले अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही दिन ढिलाइ भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।